जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्न पिउनुस् यो पेयपदार्थ — Sanchar Kendra
एजेन्सी । छाला सुन्दर र चम्किलो बनाउन खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । ताजा फलफूल, सागसब्जीले छालालाई स्वस्थ राख्न अहम भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । तर, जाडोमा छालासम्बन्धी समस्याहरु पैदा हुने गर्छन् । जाडोमा छालालाई स्वस्थ राख्न विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरिन्छ ।
यसमध्ये केही पेयपदार्थ छन् जसले छालालाई चम्किलो र सुन्दर बनाउन मद्दत गर्छ । ती पेयपदार्थले छाला मात्र होइन सम्पूर्ण शरीरलाई समेत स्वस्थ राख्ने गर्छ ।
जाडोमा छालालाई सुन्दर र चमकदार बनाउन तीन प्रकारका चीजहरु मिसाएर पेयपदार्थ निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि टमाटर, धनिया र अदुवाको आवश्यकता पर्छ । टमाटर र अदुवा छालाका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
गर्भवती महिलाले आधा कप मात्रै कफी पिउदा पनि बच्चा सानो जन्मने, किन हुन्छ यस्तो ?
कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? कम वा बढी सुते यस्तो गम्भिर असर पर्ने
गर्मीका समयमा खानुहोस यस्ता १० खानेकुरा, कहिले लाग्नेछैन कुनै रोग
जथाभावी पेन किलरको प्रयोगले मिर्गाैला रोगको जोखिम– डा. प्रेम ज्ञवाली
आलु कसले खान मिल्छ ? कसले मिल्दैन ? सबैले थाहा पाउनुपर्ने यस्तो छ गज्जबको तथ्य